ओम अस्पतालबाट डाक्टर भोला रिजाल बाहिरिनुको यस्तो छ भित्री कथा :: PahiloPost
ओम अस्पतालबाट डाक्टर भोला रिजाल बाहिरिनुको यस्तो छ भित्री कथा
7th September 2018, 10:44 pm | २२ भदौ २०७५
'किन बाहिरिए रिजाल ओम अस्पतालबाट?'
ओम छाड्दै गर्दा उनले भनेका छन्, 'बिरामीलाई राम्रो सेवा दिनको लागि ओम छाड्नुपरेको हो। सबै नागरिकको लागि सेवा दिन ओम अस्पताल उपयुक्त भएन।'
'हैन' डाक्टर रिजालका नजिक डाक्टरहरु भन्छन्, 'व्यवस्थापनसँगको टकराव नै उनी बाहिरिनुको कारण हो। शेयरधनीबीच वर्षौदेखिको द्वन्द्व थियो। सहन नसकेर उनले अस्पताल छोडे।'
ओम अस्पतालको 'हाइप' निर्माण यिनै कुराहरुले गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय ओम अस्पतालमा यस्ता गतिविधिहरु कम हुँदै गएका थिए। वर्षेनी ओम अस्पतालको क्रेज घट्दो थियो। नर्भिक, ग्राण्डी र मेडसिटी अस्पतालले ओम अस्पताललाई धेरै पछि छोडिसकेको थियो।
पछिल्लो समय यिनै कारणले ओम अस्पतालबाट धेरै नाम चलेका डाक्टरहरु बाहिरिए। अस्पतालले उनीहरुलाई रोक्न कुनै प्रयास गरेन। 'यिनीहरु गएर के नै हुन्छ र?' अस्पताल यही बन्दै बसिरह्यो। डा रिजालको उनीहरुलाई रोक्न गरेको प्रयास असफल भयो।
स्थापनाकालदेखि कार्यरत अस्पतालबाट रिजाल एनएमसीमा पुगेका छन्। उनी भन्छन्, 'म कसैलाई जित्न चाहन्न। आफूले चाहेको धेरै काम गर्न सकिन। अरुलाई दोष दिनुभन्दा ती अपूरा कामहरु अब पूरा गर्ने कोसिस गर्ने छु।'
ओम अस्पतालबाट डाक्टर भोला रिजाल बाहिरिनुको यस्तो छ भित्री कथा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।